Puntland oo ka hadashay xaalada ka taagan dawlad deegaanka soomalida Ethopia. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Puntland oo ka hadashay xaalada ka taagan dawlad deegaanka soomalida Ethopia.
Puntland oo ka hadashay xaalada ka taagan dawlad deegaanka soomalida Ethopia.
August 13, 2018 - By: Mohamud Nadif
Dawladda Puntland waxay ka xun tahay xaalada amni ee ka aloosantay Dawladd Deegaanka Soomaalida Itoobiya ( DDSI) iyo isbadelada sababay dhimasho, dhaawac iyo hanti burbur dhaqaale, sidoo kale Dawladda Puntland waxay ka xun tahay dagaalada ahliga ah ee ka dhex qarxay Qowmiyaddaha Soomaalida iyo Oromada, arintaas oo ah mid laga murugoodo in ay maanta shacab aan waxba galabsan dhimanayaan.
Sidaa daraadeed Dawladda Puntland waxay la wadaagaysaa Umadda Soomaaliyeed iyo shacabka Puntland inay jiraan hanti gaadiid ah oo laga leeyahay Dawladd Deegaanka Itoobiya oo kusoo qulqulaya xuduudaha Soomaaliya ay la wadaagto Dawladd Deegaanka Soomaalida Itoobiya (DDSI).
Hadabba Dawladda Puntland waxay go’aan-satay in la bad-baadiyo hantida lala soo goosanoyo ee ay leeyihiin shucuubta kala duwan ee Itoobiya
Dawladda Puntland waxay ka mamnuucday in ay soo galaan gudaha Puntland hanti iyo gaadiid lagala soo goostay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya.
Dawladda Puntland waxay faraysaa dhammaan laamaha amniga in gacanta lagu dhigo hanti iyo gaadiid kasta oo lala soo goostay lagana leeyahay Dawladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo guud ahaan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya.
Dawladda Puntland waxay la tiigsan doontaa sharciga cidkasta oo lagu qabto hanti iyo gaadiid laga leeyahay Dawladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya (DDSI) iyo guud ahaan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya.